बच्चाहरु छोडेर आमा अर्कैसंग बिवाह गरेर हिंडेपछि, छोराछोरी आमा फर्कने प्रखाईमा कुर्दै (भिडियो) – Khabar Silo
बच्चाहरु छोडेर आमा अर्कैसंग बिवाह गरेर हिंडेपछि, छोराछोरी आमा फर्कने प्रखाईमा कुर्दै (भिडियो)
Posted on February 17, 2020 Author admin Comment(0)
भारतको केरालामा अनुपाको साथमा फेलापरेका कुमार कार्की अहिले श्रीमती सावित्रासंग आफ्नो घर फर्केका छन् । दुई दुई लिएर कुमारसंग हिडेकी अनुपाले आफ्नो जिवन एक्लै विताउने निर्णय गरेकी छन् । यो घटनाले विश्राम लिँदै गर्दा फेरी भक्तपुरमा एउटा त्यस्तै प्रकृतिको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
सिन्धुली घर भई भक्तपुरमा ज्यामी काम गर्दै आएका लालबहादुर बमजनकी श्रीमती दुई साना बालबालिका छोढेर अर्कै केटासंग हिडे पछि बमजन मिडियामा आएका छन् । आफ्नो श्रीमती जोसंग गएकी छन् ति केटाले दुई छोराछोरी पनि लिएर जान्छु भनेर भनेका थिए । ४ वर्षकी छोरी र ८ वर्षका छोरालाई छोडेर उनी अर्कैसंग गएपछि ति बालबालिका रातभरी ममी कहिले आउनुहुन्छ ? भन्दै रुन्छन् ।
आमा र बुवाको माया फरक हुने रहेछ बमजन भन्छन् रातभरी छोराछोरी रुन्छन् ममी कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोध्दा केही दिनमा फर्किन्छन् भनेर फकाउने गरेको छु उनले भने । उनले कान्छिमायासंग ८ वर्ष अघि विवाह गरेका थिए । अर्कैसंग पोइल गएकी श्रीमतीलाई खोज्दै बसेका उनले दुई दिन पछि फोनमा सम्पर्क भएको बताए । मोवाइलमा फोन गर्दा केटाले फोन उठाएको र तपाईको श्रीमतीले मेरो दिमाग खायो भनेर केटाले सुनाएको उनले बताए ।
लालबहादुर बमजन भक्तपुरमा ज्यामी काम गर्थे भने कान्छीमाया गलैचा उद्योगका काम गर्थिन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानलाई छोडेर गएका उदाहरण त धेरै थिए तर श्रीमान साथमै रहंदा पनि अर्कै केटासंग सम्बन्ध स्थापित भएको श्रीमानले थाहै पाएनन् ।
अहिले श्रीमती हिडिसकेपछि भने उनले खोजि सुरु गरेका छन् । श्रीमती गइसकेपछि भने अरु छिमेकी र साथीहरुले श्रीमती फोनमा अरुसंग कुरा गरिरहने गरेको बताए । उनले श्रीमतीलाई फोनमा धेरै कुरा नगर्न र साना छोराछोरीको मुख हेरेर बस्न सम्झाउने गरेको बताए ।
भक्तपुरको ठिमी र दुवाकोटमा भेटिएका कोरोना संक्रमित लकडाउनमा पास बनाएर उपत्यका छिरेका थिए
Posted on May 13, 2020 Author khabar silo
काठमाडौं : उपत्यकामा भेटिएका तीन जना कोरोना संक्रमित सबै लकडाउन छिरेको खुलेको छ। ती मध्ये भक्तपुरका दुई र काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका ९ की ३३ वर्षिया महिला छन्। भक्तपुर निवासी २५ वर्षिया महिला पनि सुनसरीबाट बैशाख २९,गते नै काठमाडौ आएको खुलेको छ। उनी मोटरसाइकलको पास बनाएर काठमाडौं आएकी हुन्। काठमाडौं आइसकेपछि ठिमीस्थित साथीकै कोठामा बसेकी उनलाई […]
थप तीन साता लकडाउन गर्ने निर्णय !
Posted on March 23, 2021 Author khabar silo
बीबीसी । को’भिडको तेस्रो लहरका कारण जर्मनीले तीन साता लकडाउन थपेको छ। लकडाउनका कारण इ’स्टर चाड प्रभावित हुने भएको छ। क्षेत्रीय नेताहरूसँग छलफलपछि चा’न्सलर ए’न्जेला म’र्केलले अहिलेको प्र’तिबन्ध अप्रिल १८ सम्म लागु हुने बताएकी छन्। अप्रिल १ देखि ५ सम्म कडा प्र’तिबन्ध लगाइने र पसलहरू ब’न्द गरिने छ। मर्केलले जर्मनी अहिले अत्यन्तै ग’म्भीर अवस्थामा रहेको […]
सलह कीरा वडामा बुझाए ललितपुर महानगरले पनि पैसा दिने
Posted on July 1, 2020 Author khabar silo
काठमाडौं उपत्यकामा पनि सलह कीरा प्रवेश गरिसकेको छ। व्यवस्थापनस्वरुप ललितपुर महानगरपालिकाले सलह समाएर वडामा बुझाएबापत पैसा दिने घोषणा गरेको छ। बुधबार महानगरपालिकाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सलह समाएर वडा कार्यालयमा बुझाएवापत रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। ‘आधिकारिक रूपमै कति रकम दिने हो भन्ने छैन तर प्रतिकेजी २० रूपैयाँको दरले दिने भनिएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत […]
शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्दाराख्दै श्रीमानले श्रीमतीको गला रे’टेर ह’त्या गरेपछि,,,,,
शान्ती सेनामा गएका आर्मिको श्रीमती २० लाख रुपैया लगेर अर्कै सँग भागेपछि